Agaasimaha Ciyaaraha Ee Kooxda Man City Ee Txiki Begiristain Oo Si La Yaab Leh Uga Fal Celiyay Kadib Markii Kooxda Man City Ku Aaday Dhigeeda Liverpool Champions League – Kooxda.com
Home 2018 March Ingiriiska, Wararka Maanta Agaasimaha Ciyaaraha Ee Kooxda Man City Ee Txiki Begiristain Oo Si La Yaab Leh Uga Fal Celiyay Kadib Markii Kooxda Man City Ku Aaday Dhigeeda Liverpool Champions League
Liverpool ayaa wareega 8 dhamaadka champions league ku aaday Kooxda Man city xilli isku aadkaas uu hal shaqsi ku noqday mid ka nixiyay.
Reds ayaa ku aaday kooxda ay Premier league ka wada ciyaaraan markii jimcihii lagu qabtay Isku aadka magaalada Nyon laba bilood kadib markii ay noqotay kooxda kaliya ee guuldarada baday premier league xilli ciyaareedkan.
Guushii 4/3 ahayd ee ay Anfield kaga gaartay ayaa ahayd guuldarada kaliya ee soo gaartay city xilli ciyaareedkan halka city 5/0 ku xasuuqday Liverpool kulan ka dhacay Etihad Stadium bishii September.
Laakiin marka la eego fal celiska Agaasimaha ciyaaraha ee kooxda Man City ee Txiki Begiristain kadib markii isku aadka la sameeyay.
Kulankii ugu dambeeyay ee Liverpool ayaa markiiba ku soo dhacay maskaxda agaasimaha taas oo keentay in uu si niyad jab leh uga fal celiyo.
Muuqaal Baahiyaha UEFA ayaa la socday amrkii isku aadka la sameeyay iyada oo uu Txiki Begiristain u muuqday mid niyad jabsan kadib isku aadka ka hor intii uuna indhaha isku qaban oo uuna madaxa luxin.